ADMC-Craam – « Focus Raparivo »: telo andro ahafantarana an-dRaparivo Roland | NewsMada
ADMC-Craam – « Focus Raparivo »: telo andro ahafantarana an-dRaparivo Roland
Andrarezin’ny zavakanto malagasy ! Sanganasa tsy manam-paharoa !… Samy re teny am-bavan’ny olona avokoa ireo, raha nahita ny talentan-dRaparivo RR. Mbola manamafy izany ny tsapa raha mitsidika ny « Focus Raparivo », eny Ankatso amin’izao…
Fampirantiana ny sanganasanan-dRaparivo Roland. Fanehoana amin’ny alalan’ny sary mihetsika ny tantara sy ny lalana lavitra nodiaviny. Fampianarana fanaovana sary amina teknika manavanana an-dRaparivo Roland. Ireo rehetra ireo, samy maneho sy mampahafantatra ny momba ity andrarezin’ny hosodoko ity. Nanomboka omaly ka tsy hifarana raha tsy amin’ny zoma izao ny « Focus Raparivo », karakarain’ny ADMC-Craam eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.
Raha ny fanazavana teny an-toerana, ny « Raharaha 29 marsa 1947 » no fototra lehibe ho an’ny hosodokon-dRaparivo Roland, fantatra amin’ny anarana maha mpanakanto « Raparivo RR ». Niaina tamin’izany izy ka nahita ny zava-niseho marina. Rehefa niala ny tanàna noho ny nafitsoky ny mpanjanatany, zary nahita ny hakanton’ny zavaboahary. Nasehony anaty hosodoko ireny. Anisan’ny mampiavaka azy eo amin’ny teknika fanaovan-tsary indray ny fampiasana antsy kely…
… Fantatra fa efa manao ny fanamaroana isa ny tabilao mirakitra ny sanganasan-dRaparivo RR ankehitriny ny zanany. « Mba hananan’ny Malagasy isan-tokantrano ny sanganasany ny antony anaovana izany », hoy i Tiana Raparivo. Ity zanany ity rahateo ny hanazava ny momba ny fampiasana ny antsikely eo amin’ny fanaovana hosodoko, anio, eny amin’ny ADMC-Craam Ankatso.